Hal-abuurnimada iyo Xuquuqda-qoraalka | Martech Zone
Tani waa, laga yaabee, mid ka mid ah dooda ugu fiican ee ku saabsan sida sharciyada xuquuqda daabacaada (IMO) si fudud ma ahan cadaalad daro, laakiin sidoo kale waxay caqabad ku tahay hal abuurka dhaqankeena. Xanuunka ay keeneen sharciyadan waxaa sii xumeeyay qarxinta fursada uu internetka na siinayo. Xitaa ka sii macaan ayaa ah in farriinta iyo taariikhda halkan looga hadlayo Larry Lessig, qareen.
Koofiyad Koofiyad Sh Xasaan Xuseen raadinta!
Tags: hoteeladaaynasafarkadib u eegista safarkaQoraalka
Naadiga Teknolojiyadda ee 'Southside Smoosier Tech'
Sheeko Dhab ah: Database Drop? Guji… Doh!
Jul 12, 2008 markay ahayd 1:20 AM
Haa, waan jeclahay farriintiisa. Tusaale ahaan, waan akhriyay Dhaqanka Xorta ah dhawr sano ka dib, aadna waan u dareemay xanuunkiisa. Si kastaba ha noqotee, dhammaan dacwooyinka la iibsaday iyo kuwa la bixiyay-ee aan ku leenahay congress-ka rajo kama qabo inay wax isbeddelaan mustaqbalka dhow. ;-(
Jul 12, 2008 markay tahay 3:25 PM
Xaqiiqdii waxaan dhibaato ku qabnaa waddankan oo xuquuqda ganacsigu ay dhaafsiisan tahay xuquuqda shaqsiga.